Man City Oo Garoonka Old Trafford Ku Xasuuqday Man United
Wednesday January 08, 2020 - 03:44:12 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Manchester City ayaa garoonka Old Trafford cashar ugu dhigtay deriskooda Manchester United ka dib markii
ay ku garaaceen 3-1 lugta hore ee semi-finalka Carabao Cup.
Manchester City ayaa ku guuleysatay inay cagta mariso deriskooda qeybtii hore iyagoo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah, iyadoo Bernando Silva uu ku furay gool qurux badan ka hor inta uusan caawiye ka noqonin goolkii labaad ee uu saxiixay Riyad Mahrez.
Gool uu iska dhaliyay Andreas Pereira ayaa hogaanka Manchester City ka dhigay 3-0 iyadoo qeybtii hore lagu kala nastay natiijadaas.
Mahrez iyo Silva ayaa garoonka ka baxay waqtigii nasashada iyagoo dhoolacadeynaya halka xiddigaha Man United ay murugo ka muuqatay wajigooda, waxayna durbaba ilaaween guushii ay gaareen bishii la soo dhaafay.
Bilowgii qeybta labaad waxba isma bedelin ilaa daqiiqadii 70aad markaasoo Manchester United ay ku guuleysatay inay gool soo ceshato.
Baas uu qalday Rodri ayaa u ogolaaday Greenwood inuu weerar degdeg ah qaado isagoo kubada u dhigay Rashford oo meel hoos oo geeska ah ka toogtay shabaqa.
Man United ayaa isku dayday qeybihii danbe ee ciyaarta inay soo yareyso farqiga goolasha laakiin goolhaye Bravo ayaa labo fursadood oo waa weyn ka badbaadiyay ciyaarta ku soo dhamaatay 3-1 oo ay guusha ku gaarcday kooxda Manchester City kuwaasoo haatan hal lug la sii galay finalka Carabao Cup ah.
Lugta labaad ee semi-finalka waxay ka dhici doontaa garoonka Etihad Stadium 29ka bisha Janaayo.
Kulanka kale ee semi-finalka lugtiisa hore waxaa la ciyaari doonaa habeen danbe iyadoo ay iska imaanayaan kooxaha Leicester City iyo Aston Villa.